Lacagta Apple waxay ka sarreysaa Starbucks iyada oo ah tan ugu adeegsiga badan moobiilka Mareykanka gudihiisa | Wararka IPhone
Starbucks wuxuu noqday mid kamid ah barnaamijyada loogu isticmaalka badanyahay mobilada Mareykanka sanado badan kahor, nidaam ku shaqeeya barcode aad ugu eg kan ay sidoo kale bixiso Google, sidoo kale gudaha Mareykanka, oo leh Wallet, oo ah barxada lacag bixinta Google ee tagtay. badalashada magaca dhowr jeer illaa iyo inta aad la sii joogi doonto Google Pay.
Codsiga moobiilka ee Starbucks wuxuu u shaqeeyaa sida boorsada jeebka oo aan lacag ku dari karno si aan hadhow amaradayaga ugu dalbo ka hor inta aan la gaarin aasaaska meesha aan rabno inaan ka soo qaadanno. Si kastaba ha noqotee, markii la helay tiknoolajiyada NFC, Apple Pay si tartiib tartiib ah ayey u sii kordheysay oo ay uga guuleysatay Starbucks sidii inta badan la isticmaalo boosteejada moobiilka ee Mareykanka.
Sida laga soo xigtay xogta ay bixisay eMarketer, Apple Pay waxay xilligan leedahay 30,3 milyan oo isticmaaleyaal ah oo ku nool Mareykanka, marka loo barbardhigo 25,2 milyan oo Starbucks ah. Booska saddexaad waxaan ka helaynaa Google Pay oo leh 12,1 milyan iyo Samsung Pay oo isticmaalaya 10,1 milyan oo qof.
Sida laga soo xigtay eMarketer, Apple ayaa ka faa'iideystay dhibcaha iibku waxay qaateen farsamada NFC, tikniyoolajiyad uusan Starbucks bixinaynin bixinta. Xaqiiqdii, waxay ku tiirsan tahay Apple Pay si ay dib ugu buuxiso boorsada Starbucks.
Apple waxay timid Mareykanka bishii Oktoobar 2014. Tan iyo markaas, Samsung iyo Google labaduba waxay bilaabeen barnaamijyadooda lacag bixinta ee dijitaalka ah, aaladaha ilaa hadda socdaa weli waxay ka fog yihiin tirooyinka ay Apple Pay bixiso gudaha Mareykanka
Kharashaadka ay isticmaaleyaashu ku bixin doonaan iyada oo loo marayo NFC waxay gaari doontaa 100.000 milyan oo doolar Mareykanka. Taas macnaheedu waa in celcelis ahaan, isticmaale kasta wuxuu ku qarashgareyn doonaa 1.545 doolar bixinta kaliya taleefannadooda casriga ah, taas oo ka dhigan koror 24% ah marka loo eego sanadkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple Pay waxay dhaafeysaa Starbucks oo ah tan ugu isticmaalka badan mobilada Mareykanka